Virtual Reality : စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထက် ပိုလာပြီလား? | Myanmar Tech Press
2018-01-02 2018-04-06 Admin Ecommerce, နည်းပညာ
Virtual reality (VR) လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ လူတော်တော်များများက ဂိမ်း ဒါမှမဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်နှစ်သက်ကြမယ့် စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လို့ ထင်မိကြမှာပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Sword art online ဂျပန် anime series တွေတို့လို လာမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်မယ့် ဒါရိုက်တာကြီး Steven Spielberg ရဲ့ ready player one တို့လို Virtual Reality နည်းပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ပြေးမြင်ကြမှာပါ။ သို့သော်လည်း လိုက်မမှီလောက်အောင် တီထွင်မှုတွေ မြန်ဆန်လွန်းလှတဲ့ ဒီလို ခေတ်ကြီးမှာ စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံဝတ္ထုဆိုတာလောက်နှင့်သာ ရပ်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား..?
Virtual reality ဆိုတာ headset တွေကို အသုံးပြုပြီး အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကို လူလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေထဲရောက်နေသလိုခံစားရအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ computer technology အခြေခံထားတဲ့ နည်းပညာကိုဆိုလိုပါတယ်။ လူလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တကယ်ရှိသောနေရာ နှင့် လက်ရှိအချိန် တို့အပြင် တကယ်မရှိသောနေရာ လွန်ခဲ့ပြီးဖစ်သောအချိန်ကို 3D Digital နည်းနှင့် sound system ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ စိတ်ကူးသက်သက် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ပါဝင်ပါတယ်။
Image Source: https://www.inverse.com/article/
Virtual reality ဆိုတာ ဂိမ်းတစ်ခု ရုပ်ရှင်တစ်ကားထက်ကို ပိုအရေးပါတဲ့နေရာကနေ အခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွေမှာ တွေ့လာရပါပြီ။ Zerolight လို ကုမ္ပဏီမျိုးကတော့ Virtual Reality Technology ကို အသုံးပြု ပြီး ကမ္ဘာကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Audi, Jaguar Land Rover, Nissan, Porsche, Toyota စသည်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းကာ သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ စျေးကွက်ကြားထိုးဖောက်နိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြပါတယ်။
Image Source: https://www.techworld.com/picture-gallery/
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဒီလို နညး်ပညာရဖို့ လမ်းစပျိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တော်တော်ကြာ ကမ္ဘာ ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမှ တသီးတသန့်အဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံများမှာပါဝင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းပညာတွင် နိုင်ငံတစ်ချို့နှင့်ယှဉ်ရင် နောက်ကျနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်လာသော နည်းပညာ၏ လွှမ်းမိုးမှုနှုန်းမှာ အံ့မခန်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းသုံးသူဦးရေ၊ Social Network, internet access ရှိသူဦးရေ၊ နည်းပညာအသစ်အဆန်းများ၊ ပြည်ပစျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရာခိုင်နှုန်းများစွာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
Phandeeyar Org. မှ စရိတ်နည်း VR နည်းပညာကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ ပညာရေးသင်ရိုးညှွန်းတမ်းမှာ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ လက်တွေ့ကဏ္ဌမှာ Virtual Reality နည်းပညာက လွန်စွာအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေကို စာသင်ခန်းထဲကမထွက်၊ လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်မပူရပဲ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများအပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားကတက္ကသလိုလ် ကျောင်းများမှ အတန်းပညာများကို အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာကာ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ 360ed – EduTechVenture မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆရာတန်းသင်များကို Japan နှင့် Finland နိုင်ငံများမှာ VR နည်းပညာကို အသုံးပြု ပြီး တက်ရောက်သင်ကြားနေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် India, Pakistan, China and Bangladesh အစရှိသော နိုင်ငံများမှ ကျောင်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“Virtual reality မှာ အကွာအဝေးနှင့် အချိန်မရှိဘူး” ဆိုသော စကားအတိုင်း အပြင်လက်တွေ့လောကမှ မဖြစ်နိုင်တော့သော အရာများကို ဖြစ်နိုင်အောင်လည်း Virtual Reality နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က ပုဂံငလျင်မှာ ပြိုကျပျက်စီးသွားရတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စေတီပုထိုးများနှင့် နှစ်ရာချီပြီဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးတစ်မြို့ကို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာရောက်လာသလို.. အလွန် နီးကပ်ပြီး အသေးစိတ်ကျလွန်းသဖြင့် လက်နှင့်လှမ်းထိရင်တောင် ရလောက်တယ်ထင်ရတဲ့ realistic image and sound projected နှင့် Virtual Reality နည်းပညာဟာ ကျွန်မတို့အရှေ့ကိုရောက်လာတော့မှာ မလွှဲမသွေကိုပါပဲ။
သို့သော်လည်း virtual reality ဆိုသည်မှာ game တစ်ခုထက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ စျေးကွက်ဖြန့်ချီသည့်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတစ်ခုထက် ပိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
Nathan windsor ဆိုတဲ့သူဟာ Virtual reality technology ကို အသုံးချပြီး လူသားတွေရဲ့ဘဝကို စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
“တစ်သက်လုံးပြန်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲကအချိန်ကောင်းတွေကို ပြန်နေခွင့်ရမဲ့ အခွင့်အရေး” လို့ သူကပြောပါတယ်။
Paul Hainston ( Acres Production ) တာဝန်ယူရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ လေးမိနစ်ကျော်ကြာတဲ့ Leo and Laura ဆိုတဲ့ you tube ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ virtual reality tech ရဲ့ လူတစ်ယောက်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗီဒီယိုထဲမှာ အခုဆို အသက်၉ဝကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားစုံတွဲဖြစ်တဲ့ Leo နဲ့ Laura အကြောင်းကို ပြောပြသွားပါတယ်။ အသက်ကြီးလာပြီဖြစ်လို့ အရင်လို မသွားနိုင်မလာနိုင်ဖြစ်နေတာကို virtual reality ကိုအသုံးပြုပြီး leo နဲ့ laura သွားရောက်ခဲ့တဲ့ တစ်နည်းအရွယ်ကောင်းစဉ်က အချိန်ကောင်းအမှတ်တရနေရာတွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ Leo ကို headset တပ်ပေးပြီး သူတို့အရင်က လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တစ်နေရာကို ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပြန်မရနိုင်တော့မဲ့ အတိတ်ကအမှတ်တရတွေကို ပြန်မြင်ရသလို အံ့သြဝမ်းသာသွားကြပါတယ်။
‘လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးပေးရတဲ့နေရာကနေ နေခွင့်ရတာဟာ ကျွန်တော်တော်တော် ကံကောင်းပါတယ် ” လို့ Nathan Windsor ကပြောပါတယ်။
Image Source: http://www.upworthy.com/
Leo and Laura video ထဲမှ ပုံရိပ်များ
Video link – https://vimeo.com/221173263
ဒီလို tech ကြောင့် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကို ထိုင်ရာကမထရောက်နိုင်တော့မည့်အချိန်မှာ ဒီ VR က လူသားတွေအတွက် ဘယ်လိုအသုံးဝင်လာမလဲ? VR ကြောင့် အိမ်ရှေ့ဆိုဖာကနေ ထိုင်ရာကမထပဲနှင့် နေရာမျိုးစုံကို သွားရောက်နေမလား ? ဒါမှမဟုတ် ဒီနည်းပညာအသစ်အဆန်းဟာ လူတွေကို ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး သူတို့ကို ခရီးပိုထွက်ဖြစ်အောင် ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနှင့် အချိန်ပိုဖြုန်းဖြစ်အောင် အမှတ်တရတွေ စုဖြစ်ကြအောင် တွန်းအားဖြစ်စေမလား?
Virtual Reality နည်းပညာဟာ မကြာတော့မဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ လူသားတွေအပေါ်ကို ဖျော်ဖြေရေးသက်သက်ဆိုတာထက်ကို ပိုလွှမ်းမိုးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
IT နည်းပညာ အသားပေးလာကြသော Business များ(IT Business များ)နှင့် Business ပြိုင်ပွဲများ။
← ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအပေါ် IoT ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ITခေတ် နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့် ကလေးငယ်များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု →